सं’क्रमणको जो’खिम बढ्यो, परीक्षा रोकिएन – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. सं’क्रमणको जो’खिम बढ्यो, परीक्षा रोकिएन – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
सं’क्रमणको जो’खिम बढ्यो, परीक्षा रोकिएन
लमजुङ । सङ्घीय सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोभिड–१९ को जो’खिमका कारण शैक्षिक संस्था ब’न्द गर्न दिएको निर्देशनलाई यहाँका केही पालिकाले पालना गरेका छैनन् । केही विद्यालयले जिल्लामा को’रोना स’ङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेका बेला पनि सङ्क्र’मणलाई बेवास्ता गर्दै धमाधम परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
जिल्लाका स्थानीय तहले अटेर गर्दा विद्यार्थी स’ङ्क्रमणको उच्च जो’खिममा परेका बताइएको छ । को’रोनाकै कारण राइनास नगरपालिका– ७ गरमबेसीका ३९ वर्षीया एक महिलाको मृ’त्यु समेत भइसकेको छ । स’ङ्क्रमणमा वृद्धि हुन थालेपछि जिप्रकाले एक विज्ञप्ति निकालेर विद्यालयहरू बन्द गर्न निर्देश गरेपनि जिल्लाका सरकारी तथा नीजि विद्यालयले धमाधम परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । जिल्लाका विद्यालयमा त सुरक्षा मापद’ण्ड नै पालना छ, न त वास्ता नै छ । बेँसीशहर नगरपालिका प्रमुख गुमानसिंह अर्यालले भने, “पालिकाका विद्यालयमा धमाधम परीक्षा चलिरहेकाले सबै विद्यालयको परीक्षा सम्पन्न भएपछि मात्र विद्यालय बन्द गर्नेछौ ।”
केहीदिन अघि मात्र बेँसीशहरमा रहेको जनविकास माध्यमिक विद्यालयका ३० वर्षीया शिक्षिकालाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ । शिक्षिकामा कोरोना देखिए पनि विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीको भने कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ नभएको बताइएको छ । सो विद्यालयमा समेत धमाधम परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । विद्यार्थी स’ङक्रमणको जो’खिम महशुस गर्दै ड’राइ ड’राइ हतार हतारमा परीक्षा दिँदै घर फर्किने गरेका बताइएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमप्रसाद लुइँटेलले जिल्लाको विद्यालय तथा परीक्षा ब’न्द गर्न डिसिसिएमसीको बैठकले निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनले भने, “हामीले सबै पालिका प्रमुखहरुलाई राखेर पनि विद्यालय ब’न्द गर्न निर्देशन दिएका थियौँ ।
उहाँहरुले पालना नगरी को’रोना स’ङक्रमणको जो’खिमका बीच धमाधम परीक्षा सञ्चाालन गरिरहनुभएको छ ।” विद्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई भएकाले प्रशासनले अनुगमन मात्र गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । जिल्लामा दैनिक ११ देखि २४ जनासम्ममा कोरोना पुष्टि हुन थालेको छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको May 4, 2021 75 Viewed